युएई बिरुद्ध विशाल जितमा उत्कृस्ट प्रदर्शन गर्ने ६ नेपाली खेलाडी – WicketNepal
युएई बिरुद्ध विशाल जितमा उत्कृस्ट प्रदर्शन गर्ने ६ नेपाली खेलाडी
Birat Jung Rayamajhi, २०७६ भाद्र २४, मंगलवार १७:३७
यु-१९ एसिया कप अन्तर्गत नेपालले तेश्रो तथा अन्तिम खेलमा युएईलाई पराजित गर्दै पहिलो जित दर्ता गर्यो। टेस्ट राष्ट्र श्रीलंका र बंगलादेशसंग पराजित हुँदै समुह चरणबाट बाहिरिएको नेपाल सामु अन्तिम खेलमा युएईलाई पराजित गर्दै सुखत नतिजाको साथ घर फर्किने तथा आफुलाई युएई भन्दा बलियो टिम प्रमाणित गर्ने चुनौती थियो। नेपालले उत्कृस्ट प्रदर्शन गर्यो र १६० रनको विशाल अन्तरले युएईलाई पराजित गर्यो। पहिले ब्याटिंग गर्दै नेपालले २८५ रन बनाए र जवाफमा युएईलाई १२५ रनमै समेट्यो।
नेपालको जितमा उत्कृस्ट योगदान दिने खेलाडीहरु
१. आसिफ शेख : टस हारेर पहिले ब्याटिंग गर्ने क्रममा नेपालका दुवै ओपनर रित गौतम र पवन सर्राफ खाता नखोल्दै आउट भएका थिए। त्यसबेला नेपाललाई विकेट रोक्दै साझेदारीको आवस्यकता रहेको थियो। सोहि आवस्यकतालाई पुरा गर्दै तेश्रो नम्बरमा ब्याटिंग गरेका आसिफले कप्तान रोहित पौडेलसंग तेश्रो विकेटको लागि ७१ रनको साझेदारी गरे।
प्रतियोगितामा यस अघिको २ खेलमा श्रीलंकासंग ७ तथा बंगलादेशसंग मात्र ३ रन बनाएका आसिफले सम्भवत यु-१९ करियरको अन्तिम खेलमा ४५ रनको जिम्मेवार इनिंग खेले। उनले ५४ बलमा ८ चौका प्रहार गरे।
२. रोहित पौडेल : कप्तानी इनिंग खेल्ने क्रममा सर्वाधिक ६७ रन बनाएका रोहितले आसिफ शेखसंग ७१ रनको तथा चौथो विकेटको लागि सन्दिप जोरासंग ८५ रनको साझेदारी गरे। सोहि साझेदारीको बलमा नेपालले ठुलो योगफल तयार गर्न सक्यो। श्रीलंकासंग ४७ तथा बंगलादेशसंग १४ रन बनेका रोहितले कप्तानी इनिंग खेल्दै प्लेयर अफ द म्याच चुनिने क्रममा ८४ बलमा ९ चौका र १ छक्का प्रहार गरे।
३. सन्दिप जोरा : आसिफ शेख र रोहित पौडेल बीचको साझेदारी आसिफको विकेट पछि टुट्न पुग्दा क्रीजमा रहेका रोहितलाई साथको आवस्यकता थियो। यस क्रममा सन्दिप क्रिजमा आएर रोहितसंग ८५ रनको साझेदारी मात्र गरेनन् लगातार रन बनाउदै रन गति पनि स्वस्थ राखे। अर्धशतक बनाउन भने चुकेका जोराले ५३ बलमा ६ चौका मदतले ४८ रन बनाए। यस अघि बंगलादेशसंगको खेलमा सन्दिपले अर्धशतक ( ५६ रन ) बनाएका थिए।
४. रासिद खान : ओपनर असफल भए पनि मध्यक्रममा आसिफ शेख, रोहित पौडेल र सन्दिप जोराले राम्रो ब्याटिंग गर्दै नेपाललाई राम्रो दिशा तर्फ अघि बढाए। तर रोहित पौडेलको विकेट पछि भने नेपालले लगातार विकेट गुमाउन पुग्यो। यस क्रममा सन्दिप जोरा , भिम शार्की र कुशल मल्लले पनि छोटो अन्तरालमा विकेट गुमाउन पुगे। एक समय १६४/३ को अवस्थामा रहेको नेपाल लगातार विकेट गुम्दा २०६/७ को अवस्थामा पुग्यो।
सो अवस्थामा आठौँ विकेटको लागि रासिदले कमल ऐरीसंग ७० रनको साझेदारी गर्दै नेपाललाई ठुलो योगफलतर्फ डोर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अन्तिम ओभरमा आउट हुनु अघि उनले ४४ बलमा ५ चौका र १ छक्का मदतले ४४ रन बनाए। त्यति मात्रै हैन रासिदले बलिंगमा पनि २ विकेट लिंदै आफ्नो अल-राउण्ड क्षमता पुनः प्रदर्शन गरे।
५. कमल सिंह ऐरी : नेपाल २०६/७ को अवस्थामा रहंदा रासिद खानसंग ७० रनको साझेदारी गरेका कमलले आक्रामक ब्याटिंग गरे। उनले मात्र २६ बलमा ५ चौका र २ चक्का प्रहार गरे। बलिंगमा समेत उनले १ विकेट लिए।
६. सागर ढकाल : ठुलो योगफल बनाए पछि युएईलाई १२५ रनमै समेट्ने क्रममा देब्रे हाते स्पिनर सागरले उत्कृस्ट बलिंग गरे। ३ विकेट लिने क्रममा ढकालले ७ ओभरमा २ मेडन ओभर गर्दै मात्र २० रन खर्चेर दबाब बनाउने काम गरे। यस क्रममा उनले युएई ओपनर सयद हैदर, तेश्रो नम्बरका भी. अर्भिन्द र चौथो नम्बरका अंश टन्डनको विकेट लिए।
यस बाहेक खेलमा पवन सर्राफ, सुर्य तामांगको पनि महत्वपूर्ण योगदान रह्यो। पवनले ब्याटिंगमा सुन्यमा आउट भए पनि बलिंगमा २ विकेट लिए। सुर्यले पनि २ विकेट लिने क्रममा ७ कसिलो बलिंग गर्दै ७ ओभरमा मात्र १८ रन खर्चिए।